News - Kala soocida xaaladaha ka shaqeynaya birta
Xaaladaha ka baaraandegidda birta waxaa ka mid ah heer-kulka qaab beddelidda, xawaaraha cilladda iyo qaabka cilladda.
Kordhinta heerkulka cilladaha biraha ayaa ah tallaabo wax ku ool ah oo lagu hagaajinayo been-abuurka biraha. Inta lagu jiro howlaha kuleylka ee birta, kolba heerkulka kululaynta uu kordhayo, dhaqdhaqaaqa atamka birta ayaa kordha, soo jiidashada udhaxeysa atamka wey daciiftay, taas oo fududahay soo saarista siibashada. Balaastiigga ayaa la hagaajiyay, caabbinta cillad-darrada ayaa hoos u dhacday, iyo is-beddelka si weyn ayaa loo hagaajiyay, sidaas darteed been abuurka guud ahaan waxaa lagu sameeyaa heerkul sarreeya.
Kuleylka biraha waa xiriir muhiim ah dhammaan howlaha wax soo saarka, oo si toos ah u saameeya wax soo saarka, tayada wax soo saarka, iyo isticmaalka wax ku oolka biraha.
Shuruudaha kuleylka biraha waa:
Marka la eego xaaladda kulaylka isku mid ah ee billet-ka, heerkulka looga baahan yahay ka-shaqeynta waxaa lagu heli karaa waqti gaaban, iyadoo la ilaalinayo sharafta biraha, lana yareynayo isticmaalka biraha iyo shidaalka. Mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ayaa ah in la go'aamiyo kala duwanaanta heerkulka birta. Taasi waa, heerkulka foojignaanta bilowga ah ee macquulka ah iyo heerkulka ugu dambeeya ee been abuurka ah. Heerkulka been abuurka ah ee bilowga ahi waa heerkulka bilowga ah ee foojarka. Mabda 'ahaan, waa inay sarreysaa, laakiin waa inuu jiraa xad. Haddii xaddidan la dhaafo, birtu waxay yeelan doontaa cilladaha kululaynta sida oksidation, decarburization, overheire and overburning. Waxa loogu yeero overburning waxaa loola jeedaa heerkulka kululaynta birta. Haddii ay aad u sarreyso, oksijiintu waxay dhex geli doontaa birta si ay u oksiideyso xuduudaha hadhuudhka oo ay u sameysmaan xudduudo hadhuudh oo jilicsan, kuwaas oo si fudud loo jebiyo inta lagu guda jiro abuurista, sidaas darteed heerkulka been abuurka ah ee kaarboonka kaarboonku waa inuu ka hooseeya 200 ° C adag
Heerkulka ugu dambeeya ee been abuurka ahi waa heerkulka been abuurka ah ee joojinta. Mabda 'ahaan, waa inuu ahaadaa mid hooseeya, laakiin aan aad u hooseyn, haddii kale biraha ayaa mari doona qallafsanaan shaqo, taas oo si weyn u yareyn doonta balaastigeeda isla markaana kordhin doonta xooggeeda. Been abuurka waa shaqo badan. Way ku adag tahay birta kaarboon-sare iyo birta qalabka isku-dhafan ee kaarboon-karka ah. Marka la eego xitaa dildilaaca.
Heerka xawaaraha cillad-darrada Heerka cillad-goosadka halkii cutub. Saamaynta xawaaraha isbeddelka ee ku saabsan been abuurka birta ayaa is burinaya. Dhinac, marka xawaaraha cilladdu kordho, dib u soo kabashada iyo dib-u-soo-kabashada ayaa aad u habsaamay, oo qallafsanaanta shaqada laguma guuleysan karo waqtiga. Phenomenon, caagagga birta ayaa hoos u dhacaya, caabbinta cillad-darrada ayaa sii kordheysa, iyo uur-ku-jirta ayaa ka sii daraysa. Dhinaca kale, inta lagu guda jiro hawsha cillad-soo-celinta birta, qayb ka mid ah tamarta ku baxda cilladaha balaastigga ah ayaa loo beddelay tamar kuleyl ah, taas oo u dhiganta kuleylinta biraha si loo kordhiyo caagagga birta. , Caabbinta cillad-yaraanta ayaa hoos udhaca oo isbadalku wuu sii fiicnaadaa Xawaaraha isbeddelku wuu sii weynaadaa, saa waxaa u muuqda saamaynta kuleylka.
Hababka qallooca waa kala duwan yihiin, xaalada culeyska gudaha ee birta qalloocan wey ka duwan tahay. Tusaale ahaan, xaaladda saddex-geesoodka isku-xoqidda inta lagu jiro cillad-soo-saarka extrusion; xaaladda isku soo ururin laba dhinac ah iyo xiisad hal dhinac ah inta lagu jiro sawirka; Xaaladda culeyska ee qeybta dhexe ee maran marka afaafka qaro weyn yahay Cadaadiska cadaadiska, qeybta sare iyo hoose ee durugsan iyo jihada shucaaca waa cadaadis cadaadis leh, jihada toosanna waa culeys kacsan.
Tababbarku wuxuu cadeeyay in walbahaarka kajira sedexda jiho, inbadan oo ka mid ah cadaadiska cadaadiska, ay fiicnaanayaan caaga birta; markasta oo ay sii kordhaan tirada cadaadiska kacsan, ayaa sii xumaanaya balastarka birta. Is-caabbinta cillad-darrada ee ay keento isla xaalad culeyska ayaa ka weyn tan walaaca walaaca leh. Cadaadiska cillad-darrada iyo cadaadiska kacsan ee gobolka ayaa kordhiya masaafada u dhexeysa atamka birta, gaar ahaan marka ay jiraan cillado ay ka mid yihiin daloolada iyo dildilaaca yar ee birta, iyadoo la raacayo ficilka cadaadiska kacsanaanta, diirada diiqaddu way fududahay in lagu arko cilladda, taas oo sababta dildilaaca si loo ballaariyo, oo xitaa u burburiyo duugga. Heerka cadaadiska cadaadiska ayaa yareynaya masaafada interatomic ee birta, mana sahlana in la ballaariyo cilladda. Sidaa darteed, balaastikada birta ayaa kordheysa, laakiin culeyska cadaadiska ah wuxuu kordhiyaa iska caabinta khilaafaadka gudaha ee birta, iyo caabbinta qallooca ayaa sidoo kale kordheysa. Isku soo wada duuboo, been abuurka birtu kuma xirna oo kaliya nooca birta, laakiin sidoo kale waxay ku xiran tahay xaaladaha isbedelka inta lagu gudajiro howsha saxaafadda. Ku dadaal inaad abuurto qaybta ugu waxtarka badan ee waxyeellada leh si loo siiyo ciyaar buuxda caagagga birta, yaree caabbinta cilladda, yareeyso isticmaalka tamarta, iyo sameynta qallooca si loo gaaro saameynta habka ugu wanaagsan.